सफलताका लागि ‘समय व्यवस्थापन’ : महत्वपूर्ण टिप्सहरु - Arthapage
प्रकाशित मितिः ५ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:३० July 20, 2020
२० समयको गतिः
३० समय व्यवस्थापनः
४० समय व्यवस्थापन मेट्रिक्सः
समय व्यवस्थापन आज व्यवस्थापनको सन्दर्भमा निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । समय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका लेख, रचनाहरु एवम् पुस्तकहरु पनि लेखिएका छन् । यही क्रममा स्टेफेन कोभे ९क्तभउजभल ऋयखभथ० ले कुन काम कहिले गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गर्न समय व्यवस्थापन म्याट्रिक्सको निर्माण गरेका छन्, जुन निकै लोकप्रिय पनि रहेको छ ।
५० समय व्यवस्थापन किन ?
समयको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मानिस अफिस र समाजमा कहिल्यै पनि आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्न सक्दैन । एक सफल व्यक्ति बन्न समय व्यवस्थापनले सहयोग गर्दछ । समयको महत्व नबुझ्ने र समय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति कहिले पनि व्यवस्थापक बन्न सक्दैन र ऊ माथिल्लो पदमा पनि पुग्न सक्दैन । समयमा परीक्षाहलमा नपुग्ने विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट बन्चित हुनु पर्दछ । अन्तरवार्तामा समयमा नपुग्ने व्यक्तिले जागिर पाउन सक्दैन । समयमा निर्णय लिन नसक्दा संस्थालाई अर्बौँको रकम नोक्शानी हुनसक्छ । तोकिएको समयमा साँवा–व्याज नबुझाउनेले हर्जाना तिर्नु पर्दछ । समयमा विमानस्थल नपुग्दा हवाइजहाज छुट्न सक्छ । ब्लडप्रेशरको रोगीले समयमा औषधि नखाँदा उसलाई हृदयघात हुनसक्छ । समयमा अस्पताल नपु¥याउँदा विरामीको मृत्यु हुनसक्छ । हुन पनि हो समय मानिसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो, जसको सदुपयोग गर्नसके मानिस मालामाल हुनसक्छ । समय व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा नेपोलियनको एक भनाइ निकै सान्दर्भिक मानिन्छ । उनले भनेका छन् “तिमी मलाई युद्ध हार्दै गरेको भेटाउलाउ । तर, एक मिनेट पनि समय खेर फालेको भेट्टाउँदैनौँ ।” वास्तवमै समयको सही व्यवस्थापन भनेको समयको भरपूर उपयोग नै हो ।
अर्थात् यसलाई आजै गर भोलि त धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । वास्तवमै भोलि भन्ने कुरा कहिले पनि आउँदैन । भोलि त हाम्रो भ्रम मात्रै हो ।
६० समय व्यवस्थापन कसरि गर्ने ?
(सुरज घिमिरे ,लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, बुर्तिबाङमा शाखा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन् । )
प्रकाशित मितिः ५ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:३० |
Prevतारे होटलका कर्मचारीलाई बम्पर उपहार स्काम नगरी तलब, रिटायर्ड विशेष सुविधा
Nextबैंकमा सेवाग्राहीका दुःख : भित्र सामाजिक दुरी, बाहिर भिडभाड